Asụsụ Bekee Grammar Online »Mahadum Hodges - Admissions
Categories: Gtọ asụsụ Bekee, Asụsụ Bekee, Hodges Jikọọ, Ntuziaka Ntanetị, Ọzụzụ na Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ
-Eme nke ọma Na Online English Onlinetọ asụsụ ọmụmụ Site Hodges Jikọọ!
Nabata na Mmemme Grammar Online nke Mahadum Hodges, sistemụ usoro iji ghọta usoro ụtọ asụsụ Bekee sitere na isi ruo ọkwa ọkwa dị elu. Ezubere usoro ihe omume anyị nke onwe anyị maka ndị okenye na-abụghị ndị Bekee ka ha ghọta ụtọ asụsụ ma jiri obi ike na-asụ Bekee. Nweta ikike ị chọrọ n’aha, ngwaa, nkebiahịrị na nkebiasụsụ. Nkà ndị a nwere ike inyere gị aka ịgbasa ikike ị nwere iji Bekee rụọ ọrụ nke ọma na ụma yana / ma ọ bụ mụbaa ohere ịnweta ego!
Usoro a bụ maka ndị chọrọ mgbanwe n'ịmụta na ịntanetị, ịnweta ekwentị ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka, ma eleghị anya ihere ma ọ bụ ihere iji kwurịta okwu na klaasị ma ọ bụ gburugburu mmadụ, yana / ma ọ bụ chọọ usoro Bekee emepụtara iji nyefee nkuzi Bekee n'ịntanetị. ọnụ ọnụ. Bido usoro ịhazi asụsụ bekee dị n'ịntanetị taa!
Nke a bu ihe achoghi acho akwukwo nke enyere dika ihe nke Hodges Jikọọ Mmemme Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ,, ebe anyị na-ejikọ gị na onye were gị n'ọrụ choro nkà ịkwesịrị ịga nke ọma.
Chọọ ọmụmụ asụsụ bekee niile
Chọọ Mmemme Hodges Jikọọ
Ozi gbasara asụsụ Bekee na asụsụ Bekee
Bido na mbido: Ntọala Ntọala bekee nke Bekee 1, 2, & 3
Ghọta otu esi amata ma jiri aha, nnọchiaha, edemede, nkọwaaha, nweta, ma oge ugbu a na oge gara aga nke Be. Mụọ otu esi eme isi, mee ajụjụ, na nkwekọrịta iji bulie nghọta na ịsụ asụsụ.
Malite: $ 299
Asụsụ Bekee Bekee 1
Asụsụ Bekee Bekee 2
Asụsụ Bekee Bekee 3
Debanye aha maka mbido Bekee
Gaa n'ihu na ọkwa dị elu: Usoro asụsụ Bekee nke 4, 5, & 6
Ghọta otu esi achọpụta ma jiri oge dị mfe ma na-aga n'ihu n'oge a, n'oge gara aga, na n'ọdịnihu, mee atụnyere na arịrịọ, ma chọọ ma nye ndụmọdụ na ikike. Mụta otu esi ejikọta ahịrịokwu ma jiri ngwaa nkebi ahịrịokwu yana ụdị jikọtara iji mee ka nghọta na ịma were were dịkwuo elu.
Ogologo: $ 299
Asụsụ Bekee Bekee 4
Asụsụ Bekee Bekee 5
Asụsụ Bekee Bekee 6
Debanye aha maka Bekee
Mechie na ọkwa dị elu: Usoro asụsụ Bekee nke asụsụ 7, 8, & 9
Ghọta otu esi achọpụta ma jiri oge niile dị mfe, zuru oke, na-aga n'ihu, njirisi okwu na aha okwu, olu na-eme ihe na nke na-agafe agafe, na ọnọdụ echiche. Mụta otu esi ekwupụta mkpa, ohere, ihe puru omume, yana olile anya na agụụ na ọnọdụ niile na ọnọdụ dị iche iche. Tụkwasị na nke a, mụta maka ụda na ụda olu okwu bekee iji bulie nghọta na ịkwu okwu were were.
Nke di elu: $ 299
Asụsụ Bekee Bekee 7
Asụsụ Bekee Bekee 8
Asụsụ Bekee Bekee 9
Debanye aha maka asụsụ Bekee
Mee akwukwo nkuzi nke na-akuziri gi otu esi eji Bekee eme ihe.
Nweta ihe ọmụmụ 9 niile na iji ekwentị mkpanaaka ọ bụla.
Usoro ọ bụla nwere Mmekọrịta mmekọrịta, ule, usoro ịkpọ okwu, yana usoro eji eme ihe.
Nnwale na-akparaghị ókè.
Agụmakwụkwọ nke Dr. Leisha Cali, Director nke ESL kuziri, ihe karịrị afọ iri abụọ na asatọ nke ahụmịhe nkuzi kuzie asụsụ bekee.
zuo niile 9 English grammar Levels for $ 795 ma ọ bụ ịzụta Mbido, nke etiti, na / ma ọ bụ Di elu maka $ 299 ọ bụla.
Echerela, Bido Na-amalite Taa!
Debanye aha na ọkwa niile nke asụsụ bekee!
More Banyere Dr. Leisha Cali, Director nke Mmemme ESL na Hodges Online
Dr. Leisha Cali, Director nke ESL, anọwo na Mahadum Hodges kemgbe 2004. Ọ nwere ihe karịrị afọ 28 nke ahụmịhe ma jikọta nyocha ya na ahụmịhe bara uru mepụtara site na ịkụziri ụmụ akwụkwọ Bekee dị ka Asụsụ nke abụọ n'ime afọ 15 gara aga iji nyefee usoro mmụta asụsụ. ọrụ ahụ.
Ọ mepụtara usoro mmụta asụsụ Bekee nke Bekee maka ndị na-enweghị ike ịga leta mmadụ na klas.
Nke a bụ ihe ị ga-atụ anya ya.
Ịgba ọsọ onwe gị mmemme ọzọ enwere ike ịnweta site na Kanvas n'iji ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla.
Usoro ọmụmụ asụsụ iji nyere gị aka ghọta ihe okwu a na-ekwu na nke e dere ede pụtara.
Na-enyere gị aka kwalite nkà gị karịa ịlanarị Bekee, nke nwere ike igbochi mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ohere ịnweta ego.
Ule sitere na otutu nhọrọ ichoputa ma enwere ike iwere otutu oge dika akwukwo choro.
ịmụta nnukwu okwu kama ịkọ ọtụtụ okwu, na-enye gị ohere ikwurịta okwu n'ụzọ dị irè.
Mụọ ụzọ iji zụlite ma wuo okwu na vidiyo ngwa ngwa na nkuzi ọ bụla.
Inwekwu ego maka ego gị site na olu okwu, nchekasị, ukwe, na abụ olu ụtọ - mpaghara a na-elegharakarị anya na mmemme ọdịnala na ịntanetị.
Na nkenke, Emebere Mmemme Grammar Online nke Mahadum Hodges ka ị nwee ike ịghọta etu ụtọasụsụ siri arụ ọrụ ma mụta otu esi eji obi ike ekwu okwu!
Majani Lullein, Onye isi oche Anchorage Productions Media
“Mmemme ahụ nyeere m aka iji obi ike na nkasi obi kwaga ụwa na-asụ Bekee. E wezụga ya, agaraghị m enwe ike ịgụcha akwụkwọ na mba a. ”